Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Ukuhamba e-UK kubiza kakhulu
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Theme Parks • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
UKhenketho lwaseKhaya lwaseKhaya luzixabise ngokwalo ngaphandle kweNtengiso
Iholide yasekhaya yase-UK kunye nababoneleli ngendawo yokuhlala bonyuse amaxabiso ngokukuko kulo lonke elama-2021 phakathi kwemfuno 'yokuhlala'.
Ukunyuka kwamaxabiso okhenketho lwasekhaya e-UK kunokubangela ukuba abahambi base-Bhritane bathontelane ukuya kubaqhubi abaphumayo ngo-2022
Ukunyuka kwamaxabiso okhenketho lwasekhaya kunokuthintela abakhenkethi base-Bhritane ngo-2022.
Ngama-36% abahlali base-UK 'abaxakeke kakhulu' okanye 'ngandlela ithile' abachaphazelekayo ngemeko yabo yezemali.
Ababoneleli ngeeholide base-UK kufuneka baphinde bacinge ngesicwangciso sabo sexabiso ngoku.
ezinye UK iiholide zasekhaya kunye nababoneleli ngendawo yokulala bonyuse amaxabiso ngokubalaseleyo ngowama-2021 phakathi kokunyuka Imfuno 'yokuhlala' kwaye oku kungathintela abakhenkethi base-Bhritane ngo-2022.
Ukunyusa umngcipheko kumaxabiso okukhokelela ekulahlekelweni lithuba leenkampani ezininzi zokhenketho zase-UK ezazifumene ithuba lokuqala lokunyusa ukhuphiswano nabaqhubi babakhenkethi abaphumayo. Endaweni yoko, amaxabiso agqithisileyo anokuwaxabisa ngokuphuma kwintengiso yehlobo lowama-2022 nangaphaya, xa abahambi base-UK kunokwenzeka ukuba baphinde baphume baye phesheya.
Ngokwe-Q1 2021 UK uphando lwabathengi, i-26% yabaphenduli basike iimveliso ezithile kuhlahlo-lwabiwo mali ngenxa yesifo. Ngaphaya koko, kwakwisifundo esinye, i-36% yabaphenduli base-UK bathi 'bakhulu kakhulu' okanye 'ngandlela thile' bachaphazelekayo ngemeko yabo yezemali, beqaqambisa isidingo seshishini lokuhamba leemveliso ezinamaxabiso aphantsi.
Ngelixa ibe sisiqabu kumzi-mveliso wokhenketho wase-UK ukubona ukukhula kwezokhenketho lwasekhaya kweli hlobo, kuyadanisa ukubona iinkampani zigxile kwimivuzo yexesha elifutshane kunokuba zijonge ukuzinza kwexesha elide kwishishini lokhenketho lwasekhaya lwase-UK. Iinkampani zibe nethuba elikhulu lokwenza amava okhethekileyo eholide yaseBritane kwaye zongeze ixabiso kwinkqubo. Ngelishwa, eli thuba lisemngciphekweni wokuphulukana nabanikezeli abaninzi beendawo zokuhlala ngenxa yesimo sokuxhaphaza ngokugqithisileyo ngokubhekisele kwimfuno yabahambi.
Uninzi lwabakhenkethi basekhaya banokuthelekisa iindleko kunye nokubandakanya konke Iholide zephakeji zaseYurophu, ezibandakanya iindiza, indawo yokuhlala, ukugqithiselwa, ukutya, kunye neziselo, kwaye kuye kwafumaniseka ukuba ezi holide zihlala zingabizi kakhulu kwiintsuku ezifanayo neholide zasekhaya. Ngapha koko, imigaqo yenziwa icace gca, ukurhoxisa kunye nokubuyiselwa kwemali kwenziwe ngokufanelekileyo, kwaye abathengi abaninzi bagonyiwe ngokupheleleyo. Ngenxa yoko, iwindow ivala ithuba lokhenketho lwasekhaya lokwenza umbono oqinisekileyo, kwaye uninzi lwababoneleli beeholide base-UK kufuneka baphinde bacinge ngesicwangciso sabo samaxabiso ngoku.
Ngeenxalenye zaseYurophu zivula kubakhenkethi kwakhona, abahambi bathelekisa amaxabiso kunakuqala. Ekugqibeleni, amashishini aneentlawulo ezigqithileyo anokuzixabisa ngokwazo kwintengiso yokuhamba, eyonakalisayo nengasebenziyo ixesha elide. Iinkampani zasekhaya zeholide kufuneka ziqonde imeko yokhuphiswano lwabaqhubi abahambahambayo kunye nokhuphiswano olukhulu abalwenzayo. I-Jet2holidays kunye ne-TUI zikhokelela kwindlela yokubonelela ngeeholide zephakheji njengoko zinolawulo olukhulu kuhanjiso lwazo, zidlulisela ukonga kumhambi ngohlobo lwamaxabiso aphantsi.
Ekuboniseni, indlela yabanikezeli beeholide basekhaya ekrwada kwimali yokufuna ebonakalayo ibonakala ingenangqondo kwaye inamehlo amancinci kunye nabaqhubi bezotyelelo abaphumeleleyo banokubuyisa abathengi abadala ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe njengesiphumo.